Nduzi Nmalite Site na Ihe Omume Esi Eji Jiri Nchịkọta Google
Google na-enye ụzọ dị mfe ma dị mfe iji tụọ arụmọrụ website ma melite ihe ndị na-adaba ya. Site na nchịkọta Google, ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ugbu a na-eleta ndị ọbịa, ọrụ ha mgbe ha na saịtị ahụ, oge ha na-ebi na ọdịnaya, melite ọchụchọ ọchụchọ, na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa na-emetụta weebụsaịtị. Igor Gamanenko, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Ahịa, na-enye nkọwa dị iche iche nke nkuzi ndị a chọrọ iji kụziere ndị nkụzi ụzọ ụfọdụ iji jiri Google Analytics iji melite arụmọrụ nke saịtị ha.
Ntuzi ahụ gụnyere usoro nzọụkwụ site nzọụkwụ nke otu onye nwere ike isi tinye koodu nchịkọta maka Google Analytics, na otu esi arụ ọrụ data dashboard. Site n'enyemaka ya, ndị ọrụ na-aghọta onye ha na-eleta, yana inweta ozi ndị ọzọ dị ka ihuenyo peeji, ibe nke ọ bụla nleta, ogologo oge nke oge eji eleta ọnụego, wdg. Ozi dị otú ahụ dị oké mkpa maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ nchịkọta Google maka oge mbụ.
Nchịkọta Google Analytics: Nchụso Nlekọta Mgbasa Ozi
Mgbe ị na-emepe ma ọ bụ na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ, onye nwe ya na-esetịpụ ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ iji rụzuo na njedebe nke mmepụta ya - teleprompters for speeches. Ọ bụ ihe kpatara nchikota mgbaru ọsọ dị mkpa ka ọ na-eme ka onye nwe ya mata ókè ha ruru na imezu ebumnuche ha ma ọ bụ ebe ha ga-aga. Ihe ọzọ dị mkpa metụtara ihe mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ bụ ịmara ebe ndị ọrụ nyere aka mezuo ihe ndị a sitere na ya, ebe ọ na-enyere aka ịzụlite usoro azịza n'ọdịnihu..Na nkuzi, enwere ụfọdụ okwu dịka egwuregwu zuru ezu, egwuregwu isi, na nkwupụta okwu mgbe niile, nke onye ọrụ ọhụrụ ahụ kwesịrị ịmụta iji kwadebe onwe ha na ihe ọmụma banyere otu esi eji ha maka weebụsaịtị ha.
Nchịkọta Google Analytics: Ihe Nlekọta
Nchịkọta Google na enyere ndị nwe ụlọ weebụ aka inweta uru sitere na usoro na-eme na saịtị ha. Ma ọ bụ ndenye aha na listi nzipu ozi, ma ọ bụ ịpị bọtịnụ iji kpọọ ụfọdụ mgbasa ozi, ndị a bụ ihe omume ndị ọbịa na-eme ma dị oké mkpa maka ihe ịga nke ọma nke saịtị ahụ. Uzo nke ihe ndi ozo weputara agwa onye nwe ma akwukwo ha nyere bu ihe bara uru ma o bu. Ọ na-ekwupụtakwa nke ndị ọrụ ọdịnaya na-ahụ karịa ndị ọzọ. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịmara otu esi elebara ndị na-azụ anya anya karịa ma ọ bụrụ na ha na-edebe ihe omume ha.
Nchọpụta Outbound Links Iji Google Analytics
Njikọ ọpụpụ dị nnọọ mma iji nweta maka ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Ọ gaghị ekwe omume maka otu saịtị iji lanarị naanị na weebụ. Ebe nrụọrụ weebụ enweghị ike ịbụ agwaetiti dị ka ha chọrọ akụ iji nweta mmata ma ọ bụ wulite n'elu okporo ụzọ. Ya mere, ebe nrụọrụ weebụ chọrọ saịtị ha ma ọ bụ ndị ọzọ sitere na ha nwere ike inweta ozi dị mkpa iji nweta nkwenye. Inwe njikọ ndị na-esi na ya pụta na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dịkwuo ama karịa, enyi, na nke kachasị, nke a pụrụ ịtụkwasị obi.
Nsuso ozi nbanye na nchịkọta Google
Ọ ga - ekwe omume maka saịtị iji tinye aka na ndị na - ege ya ntị. Otú ọ dị, ihe ndị mmadụ nwere ike ileghara anya bụ otu esi amata ọkwa nke njikọ aka na oge. Ntuzi ahụ na-enye aka setịpụ ihe mgbaru ọsọ weebụ nke onye ọbụla, nke na-enyere aka ịchọpụta ókè ọdịnaya nke saịtị ahụ na-etinye ndị ọbịa ahụ.